यी करोडौँ आम्दानी गर्ने अमुल्य बिरुवा आजै लिएर जानुहोला - krishipost.com
यी करोडौँ आम्दानी गर्ने अमुल्य बिरुवा आजै लिएर जानुहोला
पुर्खौली थाक थलो जाँदा यी करोडौँ आम्दानी गर्ने अमुल्य बिरुवा लिएर जान नभुल्नुहोला । यो उपाहार लिएर गए । तपाईको घरमा मात्र हैन टोल समाज, छिमेक सबैमा तपाईको स्मरण हुनेछ । सबैले तपाईलाई सम्मान गर्नेछन् । ती बिरुवाबारे सम्पूर्ण जानकारी यहाँ पोष्ट गर्दैछौ । यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला ।
रक्त चन्दन (Red Sandalwood ) ,श्रीखण्ड (White Sandalwood )खेती :
ब्यावसायिक खेती तराई देखि मध्य पहाडसम्म सजिलै गर्न सकिन्छ । साथै मध्य पहाड भन्दा माथिल्लो भेगमा समेत यसको खेती गर्न सकिन्छ । नेपालमा तराई साथै पहाड प्रसस्त भएको हुदाँ यसको खेती दुवै ठाउँमा राम्ररी फस्टाउन सक्छ । १०-२० बर्षको एउटा रुख बाट १० देखी ३० लाख सम्म आम्दानी लिन सक्निछ !
अगरवूड (Agarwood) खेती :
अगरवूड संसारको सबै भन्दा महँगो रुख हो,यो सामान्यतया समुन्द्री सतहबाट १८०० मिटरको उचाईसम्म हुर्कन्छ । १०-२० बर्षमा अगरवुडको उत्पादन लिन सकिन्छ । एउटा राम्रो चोप भएको अगरवुड रुखले रु. १० लाख देखी २ करोड सम्म दिन्छ !
नेपालको तराइ देखि २५०० मिटरको उचाइसम्म पारीलो, सेप नलाग्ने, पानी नजम्ने कोठेबारी, बगैचा, बारी, पाखो, पखेरो लगायतका जुनसुकै जमीनमा यसको खेती गर्नसकिन्छ । यसको बिरुवा रोपेको २ देखी ३ वर्षमा फल दिन थाल्दछ । कुनै कुनै बिरुवामा बर्षमा दुई पटक पनि फल फल्न सक्छ । यसको वयस्क बिरुवामा २०० केजी सम्म फल फलेको पाईएको छ । २० देखि २५ फिट अग्लो झ्याडि.्गएको हुने र एक पटक रोपेपछि सय वर्ष भन्दा बढी समय सम्म फल फलिरहन्छ । व्यापारः एकै रुखको फलबाट २ लाख देखि ५० लाखसम्म आम्दानी हुने हुंदा यसको खेतिगर्ने किसान र ब्यापार गर्ने व्यक्तिहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।यसरी बढेको व्यापारका कारण काभ्रे र रामेछाप क्षेत्रका किसानहरुको आय र जीवनस्तर धेरै उच्च भएको छ । काभ्रेको तिमाल क्षेत्रमा मात्र वार्षिक करिब २ अरबभन्दा बढीको कारोबार हुन्छ ।